'मलाई नसोध, कहाँ दुख्छ घाउ!' - Sidha News
‘म सक्दो प्रयास गर्दैछु, तर ढुक्क हुनुस् भन्न सक्दिनँ।’
बाहिर पानी दर्कियो, दरररर…। सोलारको मधुरो बत्तीमुनि खाटको खुट्टामा आड लागेर म रोएँ।
‘अरू केही गर्न परेन, मा’रानीलाई, पिल्ल रोइदिए भैहाल्यो…’
अनि हजुरआमा मलाई आफूतिर तानेर पहिले आँशु पुछिदिनुहुन्थ्यो। अनि नाकतिर हात लगेर मीठोसित हकारेको आवाजमा भन्नुहुन्थ्यो, ‘खान पाएसी त सिँगान पुछ्न नि पर्दोरइन्च लाफालाई। सिँ गर्!’
‘कस्तो दिनमा आएछु…’
मलाई जाँच्नु थियो, बतासको कठोरता। मेरो कठोरता। र, भन्नु थियो उसलाई, ‘देख्यौ, म तिमीलाई चिन्दछु, केटाकेटीदेखि नै।’
‘यो पहाडको अर्कोपट्टि के छ, बा?’ ऊनको डल्लोबाट धागो कात्दै हिँडिरहेका एकजना बाबैलाई मैले सोधेकी थिएँ।
‘क्या हुन्या हुन् र अरू? यस्तै अर्को पहाड हुन्या हुन्।’ मेरो हुलिया र प्रश्नको प्रकृति हेरेर उनी मेरो ठेगाना जान्न हतारिएका थिए।
भोलिपल्ट खाना खाइवरी हिँड्ने बेला छेवैकी हजुरआमालाई सोधें, ‘काँ गएसी सक्किन्छ यो पहाड, आमै?’
चर्खामा हातोले हिर्काउँदै मतिर हेर्दा पनि नहेरी उनले भनिन्, ‘यी पहाड? यी त काहीँ गएनी नसक्किन्या हुन्।’
‘नगए हुन्न? यतै अरू काम पनि त पाइहालिन्छ नि!’ उसले रुन्चे अनुहार लाएर भनेकी थिई।
उसलाई थाहा थियो, यो मेरा लागि काम थिएन, रहर थियो। अवसर थियो। सायद त्यसैले यति मात्र भनी, ‘नजाऊ’ भन्न सकिन।
‘ए…ए…ए…’ बाटो कट्न बाँकी र कटेर अर्कोपट्टि रमिता हेरिरहेकाहरू आत्तिएर एकैचोटी कराए। मेरो हंषले ठाउँ छोड्यो। हठात् माथ्लोपट्टिको अलिकति बाहिर उछिट्टिएको ढुंगो समाउन पुगेछु र अघिल्लो ढुंगोसँगै धस्सिइन।
सबै आइपुगेपछि पाइला चाल्नै लाग्दा मैले पछाडि फर्केर त्रसित नजरले कर्णालीलाई हेरेँ। पारिजातको ‘शिरीषको फूल’का सुनगाभाजस्तै ऊ आफ्नो सुन्दरतामा कपटता र निष्ठुरता लुकाएर अदृश्य मुख बाउँदै बगिरहेको थियो।
‘के भो, दुर्गा?’ मभन्दा अघि आएर आराम गरिरहेको साथीले सोध्यो।
बोल्न मन लागेन। ‘केही भा’छैन’ को मुन्टो मात्र हल्लाएँ। अलि सम्हालिन पाएकी थिइनँ, कोल्टीवरपर हुरीबतासले टावर बिगारेर लगभग डेढ दिन सम्पर्कमा नरहेकी छोरी अब सिद्धिई भनेर रातभर नसुतेकी आमाले फोन गरिन्।
‘काँ पुगिस्? कतिबेला पुग्छौ? बाटो कस्तो छ?’ आमाका प्रश्न ओइरिए।
‘झण्डै मरिनँ ममी’ भन्न मन थियो। ‘कस्तो अप्ठ्यारो बाटो रै’छ, तपाईंले नजा भन्नुभाथ्यो, नआउनुपर्ने रै’छ’ भनेर नाक बजाउन मन थियो।
साथीहरू डोरीमा झुण्डेर पारि आएको भिडियो खिचेकी थिएँ। सोचेकी थिएँ, घर फर्केपछि ती भिडियो देखाएर आमालाई भन्छु, ‘हेर्नु त ममी…’
बसिरहेको ठाउँबाट एक्कासि ज्यान उचालेर लामो लेग्रो तान्दै सायद आमा भन्नुहुन्थ्यो, ‘ए मेरी आमा होऽऽऽऽऽऽ…यस्तो बाटो हिँडेर ग’का तिमारू…राम, राम, राम, राम…।’
‘तीन हप्तामा काठमाडौं फर्किहाल्छु नि’ भनेर हिँडेकी थिएँ म। तर बाटोको हालत र आउनजान लाग्ने समयको हिसाबकिताब गरेर हामीले तीन हप्तालाई तन्काएर तीन महिना बनाइदिएका थियौं।
करिब एक महिनापछि फोनमा उसले भनेकी थिई, ‘कान्छु, असारको १२ गते बिहे फिक्स भयो नि।’
त्यसको केही दिनमै उसले सुनाई, ‘कान्छु, हजुरबुवा साह्रै हुनुहुन्छ। केही तलमाथि भइहाल्यो भने एक वर्ष केही गर्न हुन्न भनेर बिहेको डेट अघि सार्न लाउनुभयो ममीबुवाले।’
‘कहिले?’ मैले सशंकित भएर भनेँ।
‘वैशाखको २८,’ उसले पनि सशंकित भएरै भनी।
म एकछिन केही बोलिनँ। मनमनै छिट्छिटो नेपाल बार काउन्सिलको अधिवक्ताको परीक्षाको रिजल्ट आउने मिति र बिहेको मितिको तालमेलको हिसाब गर्दै थिएँ, उसैले बोलाई, ‘कान्छु?’
‘आउँछ्यौ नि?’ नाइँ नभन्दियोस् जसरी उसले भनी।
‘आउँछु।’ नाइँ भन्न नसकेर मात्र भनेजसरी मैले भनेँ।
‘आउँछ आउँछ, बैनी। पीर नलिनुस्। एक्लो मान्छे, काँ त्यत्रो बाटो हिँडेर जानी?’ उनले त्यसो भन्दा मेरो छातीमाथिबाट एउटा गह्रुँगो ढुंगो झिकेजस्तै भएको थियो।
उसले सुरूमा ट्वाँ परेर पहिले मेरो मुख र पछि झोला हेरी। अनि एकाएक खुसी भएर सोधी, ‘आउने भयो, होऽऽऽ?’
‘छैन। तै पनि आइहाल्छ कि भनेर।’
टेक अफ गरेर उचाइ लिँदै गर्दा स्वास्थ्य चौकीका मान्छे क्रमशः मसिना हुँदै गए। मैले हेर्दाहेर्दै गाउँपालिको अफिस, हामी बस्ने घर, प्रियंका, अघि हामी बसेको ठूलो कालो ढुंगो, एफएमको घर, हेलिप्याड, कर्णाली नदी बिस्तारै पर हुँदै गए। ‘म तिमीहरूलाई भेट्न फेरि आउनेछु,’ मैले भावुक हुँदै मनमनै भनेँ। मेरा आँखा फेरि भरिए। यसपालि खुसीले, मात्र खुसीले।
जब यी कुरा गम्छु, मनै हुरुक्क भएर आउँछ। भावनामा बहेर सोध्न मन लाग्छ, ‘ए कर्णालीका पहाडहरू हो, जसलाई तिमीहरूले आफ्नो छातीमाथि उभ्याएका छौ, उनीहरूमाथि नै तिमीहरू यति कठोर किन?’
पहाडहरू त के बोल्थे र? बस्, चुपचाप, थकित, विवश, टुलुटुलु हेरिरहन्छन्। कताकता सुसेलीरहेजस्तो लाग्छ, ‘मलाई नसोध, कहाँ दुख्छ घाउ…’
बोल्न सके उनीहरू भन्दा हुन्, ‘ए अबोध केटी, के तलाईं थाहा छैन, हाम्रो निहुँमा हाम्रा मान्छेहरूमाथि कठोर को बनिरहेको छ?’